2017 March 03 « QEERROO
Bitootessa 3/2017 Gidduugaleessa Oromiyaa Godina Lixa Shaggaar Aanaa Aadaa’aa Bargaa Mogoriitti Mootummaan Wayyaanee Maqaa Humna Aaddaa hidhatee Socho’uu dhoksitan jedhuun Waraana koomandii Poostii bobbaasuun Uummata Oromoo jiraattoota naannoo hidhaafi reebichaan hiraarsaa jiraachuu maddeen Qeerroo Moogor gabaasan.
Haalaa kanaan Uummatni Oromoo Aanaa Aada’aa Bargaa naannawaa Moogor Araddaalee Darroo Bmbii, Darroo xaaxeessaa, Dirree, Libaan jedhaaman keessaatti addatti humna waraana Koomandii Poostii humnaa ol irra qubsiisuun uummata shororkeessa jiraachuun ibsameera. Qeerroon Bilisummaa Oromoo Moogoor yakka shororkeessaan Waraanni koomandii Poostii Wayyaanee uummata Oromoo irratti rawwataa jiruuf hin jilbeeffannuu darannuu qabsoof hiriirra jechuun dhaamsa dabarsa
eNCAnews- “Ani jireenya mataa kiyyaa hin jiraadhu jireenya ummata kiyya Oromofan jiraadha” jedha Artist qabsaawaa Jaafar Yesuuf.
Diribaa Kumaa ilma qotee bulaa ture. Bara 1958 (ALH) tti abbaa isaa Obbo Kumaa Waaqoo fi haadha isaa aaddee Marartuu Tochee irraa godina Horroo Guduuruu ganda haroo shooxee kesstti dhalate. Umuriin isaa barnootaaf akka gahetti barnoota isaa 1-8 tii mana barumsaa sad 1ffaa shamboo keessatti, 8-12 ammoo magaalaa naqamteeti baraatee xumure. Sana booda leenjii barsiiauma fudhatee hojiitti boba ‘e. Continue reading →
SQ: Qeerroo Bilisummaa Oromo, Bitootessa 2, 2017